Top 6 Collagen dạng bột loại nào tốt, hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 Collagen dạng bột loại nào tốt, hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
I-Collagen yaziwa njengeprotheyini eyenza u-30% wamaprotheni emzimbeni womuntu, inomsebenzi wokuxhumanisa izicubu emzimbeni ndawonye. Ngaphezu kwalokho, ukugcwalisa nge-collagen eyanele kuzothuthukisa kakhulu impilo yakho nesikhumba. Ngaphandle kwalokho, i-collagen powder isetshenziswa abantu abaningi futhi yaziswa kakhulu ngokusebenza kwayo. Ngakho-ke ake sithole i-top 6 I-collagen powder Iluphi uhlobo oluhle, olusebenza kakhulu namuhla, ngezansi.
1 Iyini i-collagen powder?
2 Ingabe i-collagen powder inhle futhi iyasebenza?
3 Imikhiqizo engu-6 ehamba phambili ye-collagen eyimpuphu namuhla
3.1 1. I-Shiseido Collagen Powder eno-126g
3.2 2. I-Neocell Collagen Powder 6600 mg 7oz eno-198g
3.3 3. Collagen Peptides Powder Vital Proteins Collagen Peptides Unflavored USA
3.4 4. I-Korean yasekhaya Yesiphuzo I-Lemona Collagen Drink Powder enamaphakethe angama-60
3.5 5. Ifomu le-Collagen powder le-Norwegian Cod Ona Global
3.6 6. I-Hanamai Gold collagen powder enamaphakethe angama-60
Iyini i-collagen powder?
I-collagen powder ingenye yemikhiqizo esiza ukungezelela i-collagen ngqo ngomlomo emzimbeni. Njengezinye izinhlobo ze-collagen ngendlela yamaphilisi, noma amanzi, ukusetshenziswa kwe-collagen powder ukufaka iglue, ukwandisa ukuqina nokuvuselela isikhumba. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukuvuselela isikhumba, kanye nokuhlala usemusha.
Ngakolunye uhlangothi, ngenxa yefomu layo le-powder, leli fomu le-collagen kulula ukulibamba emzimbeni kunezinye izinhlobo ze-collagen. Njengamanje emakethe kunemikhiqizo eminingi ye-collagen powder enemiklamo ehlukahlukene kanye nemvelaphi ehlukene. Lokhu kusiza abathengi ukuthi babe nezinketho eziningi zokuhlangabezana nazo zonke izidingo zokusetshenziswa.
Ingabe i-collagen powder inhle futhi iyasebenza?
Nakuba i-collagen powder okwamanje isetshenziswa abantu abaningi, kusenabantu abaningi abazibuzayo ukuthi I-collagen powder Ingabe inhle futhi iyasebenza ngempela? Nalu ulwazi oluzokusiza ukuthi uhlole ikhwalithi ye-collagen powder, ikakhulukazi ngale ndlela elandelayo:
Impushana ye-collagen yenziwa ikakhulukazi ngezikhumba zezinhlanzi, ingulube, inkomo noma ukudla, ngakho iphephe kakhulu empilweni yabasebenzisi. Ngaphezu kwalokho, uma usebenzisa, abasebenzisi bazoxuba i-collagen powder neziphuzo ezihlukahlukene ezifana nejusi yesithelo, ubisi, noma amanzi amhlophe, esiza ukudala ukunambitheka okulula ukukuphuza.
Odongeni lwemikhiqizo ye-collagen powder, kunezithako ezinakekela futhi zondla isikhumba sakho ukuze sivuselele, kanye nomsebenzi wokusiza isikhumba esibushelelezi, esincane futhi esigcwele.
Imibimbi namabala amnyama noma umbala obala esikhumbeni nakho kuzoncipha uma usebenzisa imikhiqizo ye-collagen eyimpuphu.
Umkhiqizo i-collagen powder Zibuye zibe nomphumela wokuthambisa futhi zisize ukuqinisa ama-pores esikhumbeni ngempumelelo kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, inamandla okusiza isikhumba sakho ukuba sinakekelwe, kanye nokusiza isikhumba esinwebekayo nesibushelelezi.
Imikhiqizo engu-6 ehamba phambili ye-collagen eyimpuphu namuhla
Njengoba kushiwo, kunezinhlobo eziningi ezahlukene ze-collagen powder emakethe futhi zivela ezinhlobonhlobo eziningi ezahlukene, ezifanele iminyaka eminingi ukuyisebenzisa. Nansi imigqa I-collagen powder Okungcono kakhulu namuhla, ikakhulukazi ngale ndlela elandelayo:
1. I-Shiseido Collagen Powder eno-126g
I-Shiseido collagen powder ingumkhiqizo odume kakhulu emakethe futhi ukhethwa abantu abaningi. Lo mkhiqizo unomklamo olula kakhulu futhi olula ngendlela yesikhwama se-zip. Izithako eziyinhloko zalo mkhiqizo i-Vitamin C, i-collagen, i-hyaluronic acid, i-Ceramide kanye ne-coenzyme Q10, i-HA ne-Gaba, i-Royal jelly concentrate futhi ihlanganiswe namanye amavithamini namaminerali. amanzi abandayo, angenaphunga futhi aphansi ngama-kilojoule.
Eceleni I-Shiseido Collagen Powder Ngohlu oluphephile lwesithako, lo mkhiqizo we-collagen oyimpuphu usiza futhi ukwengeza inani lokuntuleka kwe-collagen emzimbeni, futhi ngesikhathi esifanayo kusiza ukwandisa ukukhiqizwa kwe-collagen yemvelo ngaphakathi komzimba. Ngaphezu kwalokho, kuletha umphumela wokunciphisa amabala amnyama, ama-freckles kanye ne-pigmentation yesikhumba, kanye nokwenza ngcono izindawo zesikhumba esimnyama, okusiza ukulinganisa umbala kanye nomsoco wesikhumba esikhanyayo nesimhlophe. Isiza ukuthambisa futhi yondle isikhumba sibe bushelelezi futhi sisha, kusiza ukuqinisa ama-pores.
Ngakolunye uhlangothi, umkhiqizo ubuye usekele ukuqinisa isakhiwo sesikhumba, kanye nokufiphala kwemibimbi, izinyawo zegwababa esikhumbeni. Ngaphandle kwalokho, kuyasiza futhi ukondla izinzipho, izinwele eziqinile, ezicwebezelayo futhi kunomphumela wokunciphisa ukulahleka kwezinwele. Umkhiqizo futhi unamandla okuqinisa ukumelana namasosha omzimba, okwenza umzimba uphile.
Izindleko zomkhiqizo: 870,000 VND.
2. I-Neocell Collagen Powder 6600 mg 7oz eno-198g
I-Neocell Collagen Powder 6600 mg 7oz Lena i-premium powdered line collagen e-US futhi iyaziswa ngekhwalithi yayo. Ngaphezu kwalokho, lo mugqa we-collagen ukhishwa ikakhulukazi esikhumbeni senkomo, unomphumela wokwengeza i-collagen yomzimba ngokuqukethwe okuphezulu kwe-collagen kuyo yonke imigqa yomkhiqizo we-Neocell kuze kufike ku-6600mg. Le Neocell Collagen eyimpuphu isekela ukumuncwa ngokushesha, ishiya isikhumba sisisha futhi sisihle.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi yenziwe nge-powder form, kulula kakhulu ukuyisebenzisa kanye nokuncibilika emzimbeni. Ngalo mkhiqizo, umzimba wakho uzosekelwa ukwengezela i-collagen ukwenza isikhumba sibe sihle futhi kwandise ukunwebeka kwesikhumba, kusize ukuthuthukisa izimpawu zokuguga okubangelwa ukuguga. Ngesikhathi esifanayo I-Neocell powder collagen isiza isikhumba somsebenzisi ukuthi sibe mhlophe futhi sikhanye, sigcine umswakama wesikhumba futhi sondle isikhumba esithambile nesibushelelezi kusuka ekujuleni. Lo mkhiqizo waziwa nangomphumela wawo ekuqiniseni izinzipho nezinwele, ukunciphisa imihuzuko yezinzipho nokulahlekelwa izinwele.
Ikakhulukazi, kuyasiza ukuqinisa amasosha omzimba futhi kubuyisele izicubu ezixhumene. Ngesikhathi esifanayo, inomphumela wokwengeza izakhi kanye nokwenza ngcono impilo yomsebenzisi.
Izindleko zomkhiqizo: 390,000 VND.
3. Collagen Peptides Powder Vital Proteins Collagen Peptides Unflavored USA
I-Collagen Peptides Powder Vital Proteins I-Collagen Peptides I-Unflavored iwumkhiqizo okungafanele uphuthelwe. Lona umugqa we-collagen oyimpuphu osetshenziswa kakhulu e-US. Izithako zalo mugqa we-collagen zitholakala ezinkomeni, kanye nokukhuliswa ngotshani ukuze kuqinisekiswe umthombo wemvelo wekhwalithi ephezulu futhi uphephe kakhulu empilweni. Ekubunjweni kwalo mkhiqizo we-collagen powder awunayo nhlobo i-Gluten, i-Dairy and Preservatives kanye ne-Non-GMO ne-Hormone.
I-Collagen Peptide Powder Lokhu kusiza ukwengeza ukuntuleka kwe-collagen kubantu ngemva kweminyaka engu-25. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukugcina ukuguquguquka, kanye nokwandisa ukuguquguquka kwamathambo, amalunga, imigqa futhi kunciphisa ingozi yobuhlungu bokuqina, ukusekela motor. Ngaphandle kwalokho, iphinde ibe nomthelela wokwandisa ukunwebeka kwesikhumba, kusiza ukuvuselela isikhumba futhi kunciphise imibimbi, ukugoqa noma izinyawo zegwababa, njll. Ukusuka lapho, yondla isikhumba esimanzi futhi sibushelelezi, sikhanye esikhumbeni.ngaphakathi, kanye nokusiza ukubuyisela emuva izimpawu zokuguga nokugcina ubuhle obukhazimulayo, obusha
Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo we-collagen oyimpuphu ubuye usekele ukwenza izinwele zibe zinhle izinzipho, unciphise ukuphuka futhi usize ukwandisa amandla ezinwele. Ukwengezwa kwe-collagen njalo kuzoba yisixazululo esifanelekile sokusiza abesifazane bahlale bezethemba, benempilo futhi bethanda impilo.
Izindleko zomkhiqizo: 1,145,000 VND.
4. I-Korean yasekhaya Yesiphuzo I-Lemona Collagen Drink Powder enamaphakethe angama-60
I-Lemona Collagen Phuza Impushana I-Korean yasekhaya iklanyelwe futhi ihlukaniswe ngamaphakheji ukuze ilethe lula kubasebenzisi. Lo mugqa we-collagen oyimpushana udume ngohlu lwawo lwesithako olungaqukethe izithasiselo eziyingozi kanye ne-allergic. Isithako esiyinhloko salo mkhiqizo i-collagen ekhishwa ezinhlanzini ngendlela ye-mercury futhi iqukethe i-Vitamin C. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo ulinganiselwe njengonokunambitheka kukalamula hhayi iphunga lezinhlanzi kanye nokuba kulula ukuwuphuza.
Lo mkhiqizo usiza ukugcwalisa i-collagen ne-vitamin C okuqukethwe komzimba kanye nokweseka ukuqinisa ukuxhumana kwamangqamuzana ezicubu, okwenza isikhumba siqine futhi sinwebeka. Ngesikhathi esifanayo, igcina umswakama wemvelo futhi ivimbela ukoma kwesikhumba, isiza ukunciphisa ukwakheka kwemibimbi nokugoqa, futhi ibuyisele amangqamuzana awonakele, ivuselele isikhumba futhi ivuselele isikhumba. Ikakhulukazi uma uphuza i-Collagen Lemona njalo, kuzosiza ukunciphisa amabala amnyama futhi kusize ukukhanyisa ngisho nethoni yesikhumba.
Ngakolunye uhlangothi, kuyasiza futhi ukukhulisa ukumelana, ukusekela impilo kanye nokwenza izinwele zibushelelezi futhi ziqine. Isekela ukuguquguquka kwamalunga, i-Korean Pink Collagen isiza futhi ukusekela umzimba, kanye nokunciphisa ukukhathala.
Izindleko zomkhiqizo: 465,000 VND.
5. Ifomu le-Collagen powder le-Norwegian Cod Ona Global
Bheka i-Global Cod Fish Collagen Powder umkhiqizo odume kakhulu waseNorway, odume ngokukwazi kwawo ukuletha izikhathi ezi-7 ngempumelelo kunemikhiqizo evamile ye-collagen. Isithako esiyinhloko salo mkhiqizo yi-cod collagen engu-100% evela eNorway, ngakho-ke uphephe ngokuphelele emzimbeni womsebenzisi.
Ngaphezu kwalokho, lo mugqa womkhiqizo we-collagen oyimpuphu unomphumela wokwengeza, kanye nokusiza ukugcwalisa okuqukethwe kwe-collagen umzimba ongenawo. Ngesikhathi esifanayo, inomphumela wokunakekela nokondla isikhumba, okwenza kube lula futhi kube bushelelezi. Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo usiza futhi ukuvimbela ukuguga kwesikhumba nokuwohloka, i-melasma, ukufiphala, kanye nekhono lokuthuthukisa imibimbi ngaphansi kwesikhumba nokusiza ukushwabana kwezimbotshana.
Izindleko zomkhiqizo: 589,000 VND.
6. I-Hanamai Gold collagen powder enamaphakethe angama-60
I-Hanamai Gold Powder Collagen umugqa we-collagen oyimpuphu odabuka eJapan. Lo mkhiqizo unezinhlayiya ezincane ze-collagen futhi zinomthelela wokusiza ukungena futhi ube nekhono lokumunca ngokushesha kunemikhiqizo evamile ye-collagen yohlobo olufanayo. Isithako esiyinhloko salo mkhiqizo sikhishwa ezinhlanzini futhi sihlanganiswa nobuchwepheshe bokucubungula obuhlangabezana nezindinganiso eziphakeme kakhulu zokuphepha kokudla emhlabeni.
Lo mkhiqizo unamandla okunikeza i-collagen esikhumbeni, ukusula nokusiza ukuvimbela ukwakheka kwemibimbi esikhumbeni. Ngesikhathi esifanayo, iqinisa isikhumba futhi ibuyisele ukunwebeka kwemvelo kwesikhumba, futhi ikhuthaze ukuvuselelwa kwamangqamuzana ngezinqubo zemvelo. Isiza ekuvimbeleni amabala ombala wesikhumba nokushintsha umbala, amabala amnyama, amabala futhi isize isikhumba sibe nempilo, sibomvu, sibe mhlophe futhi sishelele. Ngalo mkhiqizo kuzosiza ukwengeza ama-amino acid, amaminerali nama-colloid adingekayo emzimbeni.
Ngaphezu kwalokho, lokhu kungumkhiqizo omuhle kokubili, omuhle empilweni futhi omuhle kakhulu emathanjeni. Siza ukuvimbela nokusekela ukwelashwa kwezifo ezihlangene, kanye nokupholisa izilonda, ukugwema izibazi kulabo abalimele kanye nalabo abahlinzekwe ngepulasitiki.
Izindleko zomkhiqizo: 598,000VND.
Nalu ulwazi oluyisisekelo mayelana i-collagen powder Ngethemba ukuthi likusize uqonde kabanzi ngaleli fomu le-collagen. Ukusuka lapho, ungazikhethela umugqa we-collagen ofanelana nezidingo zakho nesimo sezempilo.
Xem Thêm Top 10 Giá treo quần áo thông minh nên có trong nhà bạn | Muasalebang
Cách Làm Chè Khúc Bạch Thanh Mát, Dẻo Dai, Thơm Ngon Hấp Dẫn | Muasalebang